शा’री,रिक स’म्पर्क गर्दा स्त’न मिच्ने कि न’मिच्ने ? य’स्तो छ डाक्टर’को सल्लाह – Gazabkonews
शा’री,रिक स’म्पर्क गर्दा स्त’न मिच्ने कि न’मिच्ने ? य’स्तो छ डाक्टर’को सल्लाह
शा’रीरिक स’म्पर्क गर्दा स्त’न मि,च्ने कि न’मिच्ने ? य’स्तो छ डाक्टर’को सल्लाह
शारी,रिक स,म्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् । शारी,रिक स,म्पर्कका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्त,न मि,च्ने समेत गर्छन् ।शा,री,रिक स,म्पर्कअघि शारी,रिक उ,त्तेजना बढाउन स्त,न मिच्ने गरेपनि शारी,रिक स,म्पर्कका क्रममा स्त,न मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ ।
यौ ,न पार्टनरको स्त,न मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरूको लागि एउटा अध्ययनको निष्कर्ष खुशी दिने खालको छ । युसी बर्कली र लरेन्स बर्कली राष्ट्रिय प्रयोगशालाले स्त,न मि,च्दा वा नि,चोर्दा क्यास,नको
खुसिको खबर ! भेटियो पाथिभरा माताको साक्षात पाइला, पत्याउनै गाह्रो हुने अनौठो रहस्य, ॐ लेखी शेयर गरौं
तपाईहरुलाई यदि पाथिभरा माता प्रति आश्था छ भने कृपया भिडियो को तल कमेन्ट बक्स मा गएर जय पाथिभरा माता लेखिदिनु होला र यो भिडियो अ’न्तिमसम्म हेर्नु’होला। पाथिभरा माताको नामले चिरपरिचित झापाका जनम भट्टराईले हाम्रो पहिलो अन्तरवार्तामा उनले आफुमा पाथीभरा माता नै प्रवेश भएको प्रमाण स्वरुप पाथीभरा माताको पाइला आफुसंग रहेको दावी गरेका थिए तर देखाएका भने थिएनन् । तर यो पटकको कुराकानीमा भने पाथिभारा माताको पाइला उनकै आँगनमा रहेको भन्दै उनले पाइला समेत देखाएका छन् ।
सोहि अनुसार उनको हजुरबाबले उक्त जग्गा किनेर घर बनाएका थिए। पछि त्यही जमिनमा पाथीभा’रा माता’को पाइला भेटिएको र त्यही वर्ष १८ ओत पुराण लगाएर माताको आशन ग्रहण गरेका समेत उनले बताए। उनी बसेको भुमिमा पाथीभाराको बास रहेको दाबि गर्दै उनी यस्तो भन्छन , ‘यहाँ आएर भक्तजनले दर्शन पाउँदा स्वयम माताको आशिर्वाद मिल्ने गर्छ। म आफैमा कुनै शक्ति छैन, यहाँ विरामी भएर आउनेलाई म आफैले ठिक पार्ने हैन त्यो त पाथिभरा माताले नै ठिक पार्नु हुन्छ।
डाक्टरले निको पार्न नसकेका रोग उन’को झारफुकले निको पारेको समेत उनको दाबी छ । जनाम भट्टराई दर्शकहरुले उनको शरीर र रुप हेरेर दिएको प्रतिक्रिया प्रति रुष्ट छन्। उनि भन्छन माताले मलाइ छान्नुभयो यो उहाँको इच्छा हो। तर मेरो शरीर पनि नाशवान छ शायद एकदिन म पनि मरेर जानेछु तर पाथिभरा माताको शक्ति भने जन्मौ जन्मान्तरसम्म रहिरहने छ।
दर्शकबृन्दहरु तपाईं हरुलाई यो भि’डियो कस्तो ‘ला’ग्यो। आजकाल दिनहुँ जसो युटुब मा नानाथरिका बाबा, माता र ज्योतिषहरुको बिगबिगी बढिरहेको छ। तर झा’पाको यो घट’ना थोरै बिशेष लागेको हुनाले हामीले तपाईंहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ।हेर्नुस उनको घरआगनकै भुमि’भित्र बाट निका|लिएको पाथि’भरा माता’को पाइला यस्तो छ ।